काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट आशीर्वाद लिनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंको चण्डोलस्थित सिटौला निवासमा पुगेर शर्माले नेता सिटौलासंग आशीर्वाद लिनु भएको हो । नवनिर्वाचित
खिलनाथ ताजपुरीया काठमाडौं, पुष १ । राजनीतिक पार्टीमा बौद्धिक नेताहरु नभएको गुनासो गरिन्छ । जेलनेललाई नै राजनीतिको पहिलो योग्यता मान्ने चलन छ । देशको जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न
काठमाडौ । युवाहरुमाझ लोकप्रीय रहेका विश्वप्रकाश शर्मालाई काठमाडौंमा भएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले महामन्त्रीमा निर्वाचित गरेको छ । शर्माले १९८४ मत ल्याएर महामन्त्रीमा बाजी मारेका हुन् । शर्माले कांग्रेसमा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले शेरबहादुर देउवा आफूहरु सबैको सभापति भएको बताउनु भएको छ ।बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता थापाले पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी
काठमाडौं । काँग्रेस सभापतिका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफू विजयी हुने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंको नागपोखरी स्थित एक होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको काठमाडौंमा जारी १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा डा. शेखर कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । कांग्रेस सभापतिका लागि शेखर सहित वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा,प्रकाशमान सिंह,विमलेन्द्र निधि,कल्याण गुरुङ
फेरि कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएका देउवाको यस्तो छ विगत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको औं १४ महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बिसं २००३ जेठ महिनामा डडेलधुरा जिल्लाको असीग्राममा जन्मिनु भएका
गाली र कटाक्षकाे पैँचो तिर्दै नेताहरू, एकताको सन्देशमा भाषणमा मात्र
तर, उनीहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता पाइँदैन । मौका पाउनासाथ कटाक्ष उत्रिनु उनीहरूको दैनिकी बन्दै आएको छ । एमाले र कांग्रेस महाधिवेशनमा शीर्ष नेतृत्वमै पालाको पैँचो भने झैं दृश्य दोहोरियो